Kwamunoenda muna Chivabvu: 10 dzakanakisa nzvimbo dzakatenderedza pasirese | Kufamba Nhau
Luis Martinez | 18/05/2021 10:25 | Nzvimbo dzekushanya, Inotungamirira
Tinoda kukuudza mune ino chinyorwa nezve kwaungaenda munaMay: nzvimbo gumi dzekutanga. Icho chikonzero chiri nyore kwazvo: chitubu chinounza yakanaka mamiriro ekunze, mazuva akareba uye tembiricha inotanga kukwidza. Senge dai zvese izvi zvaive zvisina kukwana, mwaka wemvura hausati wagara muAsia uye nguva yechando haisati yaonekwa muSouth America.
Zvese izvi zvinoita kufamba muna Chivabvu izano rakakura. Uye zvakare, mahotera anowanzo kuve akadhura kupfuura muzhizha uye nzvimbo zhinji dzinopemberera mapoka inonakidza kwazvo. Kana kune izvi zvese iwe uchiwedzera kuti nzvimbo dzevashanyi hadzina kuwanda kupfuura muna Chikunguru kana Nyamavhuvhu, une zvikonzero zvakanaka zvekufunga kwekuenda kwaMay. Tiri kuzokuratidza gumi yenzvimbo dzakanakisa kuti uzviite.
1 Kwamunoenda muna Chivabvu: gumi dzakanakisa nzvimbo, kubva kumaodzanyemba kweSpain kusvika kumahombekombe ePhilippines
1.1 Prague, mimhanzi kuenda kwaMay
1.2 Porto: kwaunofamba muna Chivabvu kana iwe uchitsvaga chimwe chakasiyana
1.3 Normandy, iyo nyika yemakomo anoyevedza
1.4 Seville, yakasarudzika chaizvo
1.5 New York inogara iri bheji yakanaka
1.6 Kupro, chishongo muMediterranean
1.7 La Palma, rwendo rwakasiyana kuCanary Islands
1.8 Bantayan, runyararo rwechiwi chePhilippine
1.9 Córdoba, runako rweCaliphal Guta
1.10 Costa Rica, iyo nyika yemapaki echisikigo
Kwamunoenda muna Chivabvu: gumi dzakanakisa nzvimbo, kubva kumaodzanyemba kweSpain kusvika kumahombekombe ePhilippines
Nzvimbo dzatiri kuzokupa dzinosanganisira nzvimbo dzakaita sekurota, mahombekombe asingaenzaniswi, zviyeuchidzo zvakawanda uye mitambo yechinyakare inozivikanwa pasi rese. Tichatanga rwendo rwedu rwekuenda kunzvimbo dzekuenda muna Chivabvu.
Prague, mimhanzi kuenda kwaMay
Prague Castle uye Cathedral
Guta guru redunhu reCzech re muBohemia Ndiyo yekutanga saiti yatinokuraira iwe. Sokunge kuti yakakura kwazvo nhaka yaive isiri chikonzero, kubva pakati paMay kusvika kutanga kwaJune inopemberera yayo International Chitubu Music Music. Makorokete makuru nevafambisi vanosangana muguta kuti vaite makonzati asingakanganwiki.
Naizvozvo, kana iwe uri mudiwa wemimhanzi, tinokurudzira rwendo kuenda kuPrague kuti unakirwe nechiitiko ichi. Uye, nenzira, usarega kushanya matunhu eCastle neMala Strana, kwaunozoona zvivakwa zvinoyevedza sePrague Castle pachayo, iyo St. Vitus Cathedral kana kukosha Charles zambuko. Zvakare, usakanganwa kufamba kuburikidza Staré Mesto, iro guta reMiddle Ages kwaunowana iyo Old Town Horo Iine wachi yayo inozivikanwa yekuongorora nyeredzi.
Porto: kwaunofamba muna Chivabvu kana iwe uchitsvaga chimwe chakasiyana
Porto, inzvimbo yakakwana yekufamba kuenda muna Chivabvu
Pamwe guta rakanakisa muPortugal riri Lisboa uye mahombekombe akanakisa munyika arimo Iyo algarve. Nekudaro, Porto zvakare ine zvakawanda zvekukupa iwe. Kune kutanga, guta rayo rekare rakaziviswa Nhaka Yenyika yezvivakwa senge kereke yayo, imba yayo yeStock Exchange, kereke uye shongwe yeClérigos kana mabhiriji ayo mazhinji pamusoro perwizi rweDuero.
Asi, pamusoro pezvo, unogona kunakidzwa nematombo ane hupenyu Ribeira, Kwavanozokupa iwo anozivikanwa echingwa echingwa uye neayo asinganyanyo kuzivikanwa Port maini. Kunyangwe, kana iwe uchida kuziva maitiro ekugadzira ekupedzisira, iwe une akawanda wineries kune rimwe divi reDuero.
Pakupedzisira, usarega kushanya mamuseum emuguta rePortugal. Isu tinokupa zano iwe iyo Ages, iri muCasa del Infante, yakanyorwa muzana ramakore regumi nematatu; imwe ye Mota yemagetsi, ine mota dzayo dzekare, uye iyo Soares do Reis Nyika, iyo inoratidza chikamu chikuru chebasa remuvezi anochipa zita rayo, rimwe remukurumbira munhoroondo yechiPutukezi.
Normandy, iyo nyika yemakomo anoyevedza
Inowanikwa kuchamhembe kwe France, Normandy yakanaka panguva ino. Ukaishanyira, uchawana mawere anoyevedza senge e Étretat, asiwo mahombekombe emusango anotarisa iyo English Channel uye mamwe anoshamisa nharaunda.
Iwe unogona zvakare kuona enhoroondo maguta senge Rouen, kwayakapisirwa Joan weArc uye ine zvivakwa zvakaita seCathedral yeMukadzi Wedu, chishongo mumhando yeGothic; iyo inoshamisa Abbey yeSaint-Ouen neChechi yeSaint-Maclou, mienzaniso miviri yeFlamboyant Gothic, uye chivakwa chakanakisa cheHotel de Bourgtheroulde, ichichinjira kuchimiro cheRenaissance.
Imwe kushanya yausingakwanise kupotsa muNormandy ndeye Le Havre, ine nhoroondo yepakati iri Nhaka Yenyika yekereke yayo yakasarudzika yeRenaissance, shongwe yemwenje yechechi yeSaint-Joseph nezvimwe zvivakwa.
Asi pamusoro pezvose, haugone kusiya Normandy usina kushanyira iyo chitsuwa cheMont Saint-Michel, iyo inosiya yayo insular mamiriro apo mafungu anobuda uye uko kunoshamisa Benedictine abbey wezita rimwe chete iriko, iyo inosanganisa maCarolingian, Romanesque uye maGothic masitayera.
Seville, yakasarudzika chaizvo
Plaza de España muSeville
Iwe zvakare haufanire kubva kuSpain kuti usarudze kwekuenda muna Chivabvu. Guta guru reAndalusia inzvimbo yakanaka yekunakidzwa nechirimo. MuSeville une zviyeuchidzo zvakanaka senge zvinoshamisira Cathedral iine zvisinganyanyo kukosha Giralda; the shongwe yeGoridhe kana the Alcazar chaiye, chishongo chinobatanidza maGothic neMudejar masitaera.
Zvakawanda zvemazuva ano, asi hapana zvishoma zvinoyemurika Spain Chikamu, Yakavakirwa iyo Ibero -American Kuratidzwa kwa1929 uye iyo inofadza nehukuru hwayo uye chimiro. Zvakare, usakanganwa kufamba kuburikidza nharaunda dzayo dzakanaka senge Triana kana izvo zva Santa Cruz uye nezvakakosha Maria Luisa paki.
Asi, pamusoro pezvo, Seville ine chimwe chinokwezva panguva ino. Pakutanga kwaMay kune mukurumbira fair, pamwe nekuvhenekerwa kwetsika uye kwaunogona kunakirwa newaini nemumhanzi wenyika.
New York inogara iri bheji yakanaka
Isu tinoshandura nyika uye kunyangwe makondinendi kukukoka iwe kuti ushanyire New York, bheji rekufamba risingambokundikana. Chero nguva inguva yakanaka yekuenda ku "guta rezvikwiriso." Mariri, unogona kutanga rwendo rwako rwe Times Square, iyo inozivikanwa nzvimbo yemakona makuru. Ipapo iwe unogona kushanyira vavakidzani vavo, kunyanya Brooklin o Harlem, uye famba nepakati Central Park kana kuona show in Broadway.
Asi izvo iwe zvausingagone kurega kuita kuona iyo Statue of Libertyla ellis chitsuwa, uko vagari vanobva kumativi ese epasi vakauya kuzotsvaga kurota kweAmerica uye chinova chivakwa chekuenda kune dzimwe nyika, uye mamiziyamu senge Metropolitan yeArt, imwe yeakakura uye akakosha pane ayo panyika.
Kupro, chishongo muMediterranean
Hunhu hwakasiyana zvakanyanya neyaakapfuura ine kwairi kuenda kwatinokurudzira ikozvino. Cyprus mubatanidzwa wakakwana wemakungwa anoyevedza uye nharaunda ine yakasarudzika nhoroondo yenhaka. Nezve yekutanga, tinokurudzira Nissi y Makronissos, kwaunogona zvakare kudzidzira kudhizaivha.
Kana iri nhaka, muCyprus iwe unowana inoyevedza mamonasteri eOrthodox akadai seayo Mutsvene Irakleidios nedzimba dzema medieval senge dze Kolossi, Yakavakwa ne Knights yeOrder yeSan Juan, padhuze ne machechi kufanana neavo Troodos massif, inozivikanwa se Nhaka Yenyika.
Kune rimwe divi, muguta guru renyika, NicosiaIwe une inoshamisa mamuseum iyo iwe yaunogona kuongorora yese nhoroondo yechitsuwa kubva kuNeolithic kusvika kuOttoman nguva. Asi usati waona iyo medieval wall yakavakwa nemaVenetians, ayo akakomberedza guta rekare iro rinowanikwa kuburikidza nemikova yakaita seiyo Famagusta.
La Palma, rwendo rwakasiyana kuCanary Islands
Roque de los Muchachos, paLa Palma
Kuti upindure mubvunzo wekupi kwekufamba muna Chivabvu, tinokurudzira chimwe chitsuwa pazasi. Tichakuudza nezve La Palma, chimwe chezvisinganyanyo zivikanwa muCanary Islands, asi izere nenzvimbo dzinoyevedza, mahombekombe ekurota uye nemataundi chaiwo.
Kuzivikanwa se "chitsuwa chakanaka"Kana iwe ukaishanyira, iwe unozogona kunakirwa nenzvimbo dzine jecha senge idzo dze Chiteshi cheNaos, Green puddle o Los Cancajos. Asi zvakare masango akasvibira emarara uye makomo anoyevedza akadai seaya Ini ndaive nemutungamiriri kana the Caldera de Taburiente, kwakatenderedzwa pakagadzirwa nyika yese.
Pakupedzisira mukati Santa Cruz de la Palma, guta guru rechitsuwa ichi, une zvivakwa zvakaita se machechi eSan Francisco neSanto Domingo, masimba senge Santa Catalina castle nedzimba dzakanaka saiye Sotomayor muzinda kana the Imba Huru yeSalazar.
Bantayan, runyararo rwechiwi chePhilippine
Sugar Beach, muBantayan
Asia inogara iri sarudzo inonakidza yekurarama zororo rakanaka, nyika dzinoshanyirwa zvakanyanya mukondinendi ino Ivo vanogara kunzvimbo dzinoshamisa, asi kana iwe uine chokwadi chekuti kwauri kuenda kuti uve muna Chivabvu unofanirwa kunge uine gungwa, funga kutizira kuchitsuwa chePhilippine cheBantayan. Pakati pemahombekombe ayo eroto, tinokurudzira izvo zve Kota, nerurimi rwayo rwejecha; Shuga; izvo zve Paradise kana kunyangwe makobvu aunogona kuwana mu virgin island, iyo iwe yaunogona kusvika nekurendesa chimwe chediki diki magwa, anonzi bangka.
Iwe zvechokwadi hauna zvimwe zvakawanda zvekuita muBantayan. Kunze kwenzvimbo dzataurwa pamusoro jecha, unogona kufamba Omagieca Obo-Ob Mangrove Ekiti, nzvimbo yakasikwa yemangrove inoshamisa. Chero zvazvingaitika, mukati medzvimbo dzekufamba kuenda muna Chivabvu, ichi ndicho chimwe cheavo vane mahombekombe ari nani uye kunyarara.
Córdoba, runako rweCaliphal Guta
Iyo mosque yeCordoba
Iyo inogara iri nguva yakanaka yekushanyira Andalusian guta reCórdoba. Kwete pasina, ndeimwe yeavo vane zviyeuchidzo zvakaziviswa kwazvo Nhaka Yenyika kutenderera pasirese. Zvinenge zvisina basa ndezvekuti isu tinokuudza iwe nezve inoshamisa Mzvishoma, parizvino iyo Cathedral yeKufungidzira kweMukadzi Wedu; yaro nhaka yeRoma; yekota yekare yechiJuda kwaunogona kushanyira iyo Imba yeSepharad and the sinagoge; ye caliphal mabhati kana kukonzeresa Alcazar weMadzimambo echiKristu.
Saizvozvo, kunze kweguta iwe une yakaoma ye Medina Azahara, imwe yemakomo, padhuze neAlhambra kuGranada, yezvivakwa zveMuslim kuSpain. Asi ndeyekuti, mukuwedzera, mukati memwedzi waMay Córdoba inopemberera yayo Bato rePatios, yakaziviswa Isingaonekwe Nhoroondo Yevanhu, uye zvakare iyo May Anoyambuka Mutambo.
Costa Rica, iyo nyika yemapaki echisikigo
Irazú Volcano, muCosta Rica
Isu takachinja zvachose rudzi rwekuenda kuti tipedze runyorwa rwedu rwekufamba muna Chivabvu. Costa Rica inomira nekuda kwehunaku hunofadza. Uchapupu hwakanaka hweizvi iwe mune yako yenyika paki network, mamwe makomo uye mamwe ari pakati pebani remahombekombe.
Nezve izvo zvekare, tinokukurudzira kuti uone iyo inobva kuArenal volcano o uyo akabva Irazú, nepo, semasekondi, ivo vari ivo Cahuita, nemakorari ayo ekorari nesango rayo rinotonhora; iyo yaBarra Honda, nemapako ayo, kana Carara's, nemiti yemuno.
Iyo yekupedzisira ingangoita zana mamaira kubva San José, guta guru renyika. Mariri, iwe unogona zvakare kuona dzinoyevedza neoclassical zvivakwa senge Nhare yeMood, iyo Post uye Telegraph kana icho che National theatre, pamwe neiyo Metropolitan Cathedral uye machechi e tsitsi, ivo kusurukirwa and the Carmen. Kana iwe uchida kuziva dzimwe nzvimbo muCosta Rica, tinokukurudzira iwe verenga nyaya ino.
Mukupedzisa, dai iwe wanga uchinetseka kwaunofamba muna may, isu takuratidza nzvimbo gumi dziri mukubwinya kwazvo panguva iyoyo. Iye zvino sarudzo yave kwauri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Nzvimbo dzekushanya » Kwamunoenda muna Chivabvu: gumi dzakanakisa nzvimbo